Ukwehla kwamandla eRussia kanye nezici zalo
Izindaba neNhlangano, Umnotho
Ukwehla kwamandla eRussia kunezici zayo. Kodwa, okokuqala, kufanele sicabange umqondo waleli gama. Ukuba khona kwalesi simo kubuya izikhathi lapho abantu baqala ukusebenzisa imali. Ekuqaleni, leli gama lisho inqubo lapho imali enikezwa khona imali iyanda. Yaqala ukusetshenziswa eNyakatho Melika, kanti nakwamanye amazwe aseYurophu.
Ukwehla kwamandla emvelo kuyisimo sezenhlalo nezomnotho, okwenza ukungalingani emphakathini, umnotho wezomakethe wezwe kanye nezindawo zayo ezehlukene zezomnotho. Ngomnotho weliphi izwe, lifaka inkinga enkulu.
Ukwehla kwamandla eRussia, ngokungafani namanye amazwe, kuye kwahlala kunemininingwane ethile. Phakathi nenkathi yezenhlalakahle, isimo sidalwe lapho abantu babe nemali eyanele, kodwa abazange banikwe izimpahla.
Umnotho waseRussia uhlale unendlela yakhe yokuthuthukiswa, ehluke kakhulu kwi-classic eyodwa. Ngenkathi ngayinye yentuthuko yayo, ukwehla kwamandla emali eRussia kwabonakala ngendlela yayo. Eminyakeni engu-30 kwakubhekwa njengokukhululwa kwemali ekusakazeni kakhulu kunesidingo. I-40s ibhalwe ngokunciphisa ngokweqile kwemali. Ukwehla kwamandla eRussia eminyakeni engama-50 kwakubhekwa njengemali eyengeziwe ngokuphathelene negolide, okudingekayo ukusabalalisa ngokugcwele. Phakathi nesikhathi sakwa-60-70-ies, ukwehla kwamandla emali kwakungokwemvelo ehlukahlukene, ngakho-ke akukwazi ukuhlolwa ngokungahleleki. Ukwenyuka kwemali kwenzeke ngendlela ekhishiwe futhi kwahambisana nokwanda okukhulu kwezindleko, ukwehla kwekhwalithi yezimpahla kanye nenani labo eliphelele.
Ukwehla kwamandla eRussia kuncike ezintweni eziningana: isikhathi eside noma isikhathi esifushane, imali noma cha. Kusukela ngo-1992, kuye kwaba nokugxuma okubukhali kwamanani, okwakunquma ukuhamba kwezinto ezicatshangelwayo. Ngaleso sikhathi, uhulumeni wezwe ukhulula amanani, ususe ukulawula phezu kwazo kanye nezinqubo zokukhiqiza, ngokungeniswa kwamanye amazwe nokuthunyelwa kwamanye amazwe.
Ngenxa yalokho, kwaba khona ukuntuleka kwemali. Akuzange kube ngokwanele ezindaweni zokuhlala ngenxa yokunyuka kwentengo. Inkinga yokunikezwa kwemali eyengeziwe kanye nokuhlelwa kwesimiso se-cashless settlement akuzange kuxazululwe le nkinga. Izinga lokukhuphuka kwemali eRussia laliphakeme kakhulu. Ukunikezwa kwemali kwanda izikhathi ezingu-7.6 ngokulandelana kokukhula kwamanani angu-26. Kodwa ngonyaka ngamunye olandelayo lokhu isilinganiso sashintsha kangcono futhi saba mncane. Lokhu kwakungenxa yezinguquko ezenziwe. Ibhange eliyinhloko lishintsha inani lemali ohlelweni, okuvumela ukuthi ushintshe izinga lesithakazelo ohlangothini oluncane noma olukhulu.
Ukwehla kwamandla emali eRussia kubangelwa izindleko zemali yokukhuphula imali futhi kwenzeka ngokumelene nesimo semali esinqunyiwe. Ngakho-ke, izindlela zokuxazulula lokhu kufanele zihluke. Ukunciphisa inani lemali aliniki umphumela ogcwele. Ngokuphambene nalokhu, lokhu kuhlose ukwehla kokukhiqiza, ukwehlisa izinga lokuphila labantu kanye nokwanda kwezikweletu ezindaweni ezihlukahlukene.
Ngakho-ke, ukwehla kwamandla aseRussia kubangelwa ukwehluleka kwesabelomali kanye nezindleko ezithengiswa ngokwemvelo.
Esinye isici salesi simo eRussia kwaba ukwehla okwesikhashana ekukhiqizeni. Kwakukhona ukuphazamiseka.
Isizathu esiyinhloko senqubo yokwehla kwamandla emali eRussia kufanele kubhekwe njengokuqedwa kokulawulwa kwemali esikhathini sokubunjwa kwamakethe ngokumelene nokwaziswa komncintiswano obuthakathaka.
Njengamanje, uhulumeni ulandela inqubomgomo ehlose ukunciphisa izinga lokunyuka kwamanani emali, ukuqiniswa kwemakethe, kufaka phakathi imakethe yemali, edlala indima ebalulekile kule nqubo. Lokhu kunomthelela ekwakhiweni kokukhiqizwa ezweni futhi kwenza kube yingozi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, izinga eliphansi lemali yokukhuphuka kwamandla emali lithuthukisa kakhulu izinga lempilo yabantu kanye nokuzinza komnotho.
Iyini imali engenayo kazwelonke?
Indlela yokuphila eRussia kumuntu olula: imali engenayo, izindleko zomndeni ovamile
Amathrendi Emakethe Yezindiza Zasekhaya
Ukufuduka kwemisebenzi yomhlaba wonke kanye nendima yayo ekusakazeni kwemithombo yomsebenzi emhlabeni
Umzila wesithathu wokushintshana komgwaqo waseMoscow: uhlelo kanye nokuqala komsebenzi
Kuyini Steam? Ukufakwa kanye nokusetshenziswa
I nokufakwa elihlangana: incazelo, izinhlobo, ukufakwa imihlahlandlela
Isilinganiso semishini yokuthunga: ukubuka okuphelele kwama-model
"Okuhlangenwe Nakho Kwabantu" - inhlanganisela esiphelele induduzo engambi eqolo
Indlela yokwelula izicathulo ekhaya - Amathiphu Ezisebenzayo!
Uyini lasesizindeni se-intanethi: nemiqondo eyisisekelo
Imaski Alginate: ukubuyekezwa, ukwakheka kanye isicelo